Haweeney guulo kasoo hoyisay magaalo madaxda Jabuuti - BBC News Somali
Image caption Faadumo waxa ay sheegtay in aad loola yaabay markii ay xilkaas isu soo taagtay
Maayarka caasimadda dalka Jabuuti ee Jabuuti ayaa waxa ay sheegtay in ay wax badan ka qabatay nadaafadda iyo bilicda magaalada.
Faadumo Cawaale Cismaan ayaa bishii Maarso ee sanadkii 2017-kii noqotay haweeneydii ugu horreysay ee maayir ka noqota magaalada Jabuuti ayadoo markii ay wadday ololaha doorashada ay dad badani su'aal galinayeen kartideeda shaqo iyo in howshaas ay ka soo bixi karto.
Faadumo ayaa BBC-da u sheegtay in ay aad ugu faraxsan tahay in ay xilkaas hayso, maadaama ay tahay haweeneeydii ugu horraysay ee loo doorto maayarka magaalada.
Waxay sheegtay kolkii ay ololaha kujirtay in haweenku ay si wayn u garab istaageen ayadoo dumarku ay yihiin sida ay sheegtay dadka ugu badan ee codeeya.
Mar ay BBC-du waydiisay sidii shacabka reer Jabuuti ay u arkeen markii ay isu soo taagtay xilkan, ayay tiri " Waxay la' ahayd wax ka yaabiyay, wayna u qaadan waayeen in ay arkaan haweeney u loollamaysa xilkan, ayadoo horay rag kaliya uun ay isu soo taagi jireen qabashada xilkan".
Madaxweyneyaasha Jabuuti iyo Eritrea oo kulmay
Shiinaha oo saldhigiisii milatari ee ugu horreeyey ee dibada ah ka furay Jabuuti
Waxa ay sheegtay in haatan raggu ay qireen in xafiisyada dumarku ay maamulaan ay yihiin xafiisyo horumar gaaray.
Ruux dumar ah marka ay xafiis madax ka tahay waxay u badan tahay in xilli hore ay timaaddo shaqada oo ayba kasoo hormarto shaqaalaha kale, ayay tiri Faadumo.
BBC-da ayaa waydiisay sida ay u aragto in Dadka reer Jabuuti ay ugu yeeraan Duqda magaalada Jabuuti ayadoo ah gabadh aan aad u da' waynayn? Waxa
ay ku jawaabtay "Kama caroodo, waayo magacayga ayay kor u qaadaysa"
Faduma ayaa intaas ku dartay in maalintii ay ugu yaabka badnayd ay ahayd maalin ay shaqo u tagtay TV-ga qaranka, oo ninkii waardiyaha ahaa ee ilinka joogay uu ku yiri maxaad ahayd? Maxaadse u socotay? Oo ay tiri waxaan ahay duqdii Magaalada? Markaas ayuu yiri adeer beenta igadaa ma tihid duqdii magaalada e gabadhaadaan aadka u yari!
Faduma waxa ay sheegtay in ugu dambayntii ay ninkaas ku qancisay in ay tahay maayarka magaalada ayna doonayso in uu u oggolaado in ay gasho xarunta Telefishinka.
Faduma ayaa BBC-da u sheegtay in markii ololaha ay ku jirtay ay samaysay ballan qaadyo badan oo ay kamid tahay hagaajinta bilicda magaalada, ballan qaadyadaasna ay fulin doonto.
Hawlaha ay gacanta ku hayso oo ay ka shaqaynayso ayay sheegtay in ay kamid yihiin, dardar galinta nadaafadda deegaanka ayadoo samaynaysa laamo arrimahaas ku shaqo leh.
Faduma Cawaale ayaa dhawaan loo doortay urur ay ku bahoobeen maayarrada caasimadaha dalalka Islaamka, waxayna sheegtay in taasi ay tahay markii ugu horraysay ee haweeney Muslim ah ay madax ka noqoto urur caynkaas ah ayna taasi sharaf u tahay guud ahaan haweenka iyo gaar ahaan haweenka Jamhuuriyadda Jabuuti.